Soo dejisan Fraps 3.5.99.15631 – Vessoft
WindowsMultimedia,Sawireynta iyo qaabeyntaDiiwaanka shaashada,ScreenshotsFraps
Bogga rasmiga ah: Fraps
Fraps – software ah oo loogu talagalay in lagu ciyaaro iyo codsiyada in ay isticmaalaan DirectX ama OpenGL technology Graphics shaqeeyaan. Muuqaaladan weyn ee software waa awoodda in ay muujiyaan tirada lugahooda per labaad, si ay u qoraan videos oo ay qabsadaan Screenshot. Fraps kuu ogolaanayaa in uu soo bandhigo statistics qiyamka tirada lugahooda per labaad, waxaa warqad u fayl ama muujiyaan counter ee hal geeska ah shaashadda. Software waxay ku waddaa in asalka iyo ta khayraadka nidaamka yar.
Video duubo ka screen
Abuuritaanka rasaas screen
Bandhigay tirada lugahooda per labaad
Ka shaqeynta asalka
Soo dejisan Fraps
Faallo ku saabsan Fraps
Fraps Xirfadaha la xiriira
Software-ka waxaa loogu talagalay in lagu sawiro isticmaalka koofiyadaha ciriiriga ama kiniinada sawirada. Software-ka ayaa taageeraya shaqada dhowr lakab oo go’aaminaya xoog cadaadiska buraashka ku yaalla dusha sare.